Tamarind Color, Shirkado Midab Tamarind, Soosaarayaal Midab Tamarind, Dhoofiyeyaasha Tamarind Color
Ku saabsan Midabka Tamarind
Uumiga catechuic acid, leucoanthocyanidin, anthocyanin waa qeybaha ugu muhiimsan ee tamarind colour.waxaan arki karnaa casaan-bunni ilaa madow-bunni madow, buro, caano ama dareere indhaheena qaawan. Waa gabi ahaanba midab dabiici ah oo laga soosaaray abuurka dhirta leguminous Tamarindus indica ee bayoolajiyada casriga ah .Waxaa si weyn loogu isticmaalay warshadaha kalluunka lagu farsameeyo, borotiinka khudradda, hilibka, hilibka reer Galbeedka u eg, baastada, badeecada la dubay iwm sida midab casaan-bunni ah.
Badeecadani waxaa loo dhoofiyay EU, Japan, USA, Asia iwm Heerka jireed iyo heerka microbiological-ka ayaa sifiican ula kulmi kara heerarka dhoofinta. Si looga fogaado been abuurka, badeecadani waxay horey u leedahay ganacsi caadi ah MAYA: Q / KLE84-2005.
Duruufaha kartoonka [baakada], oo ay ku jiraan boorsooyin badan oo cuntada ka samaysan oo laba jibbaaran. Ama kartoonno, oo ay ku jiraan boorsooyin bacaha cuntada cuntada oo faaruq ah gudahood, 20kgs halkii kartoon oo 8 kiish gudaha ku jiraan, 2.5kg halkii kiish.